Omaly dia nisy ny fihaonana teo amin'ny tompon'andraikitry ny oniversite, ny Mpianatra sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary ny OMC izay notarihin'ny Prefen'i Mahajanga. Fihaonana izay nampahafantarana ny tena zava-misy tamin'ireo mpianatra sy Ray aman-dreny mahakasika ny fitsinjarana ny trano. Tsy nahafapo ireo olona nampanatsoina ireo araka izany ny fanapahan-kevitra ny amin'ny tsy mbola hampidirana ireo mpianatra amin'ny trano. Fanapahan-kevitra izay noraisina mba tsy hisian'ny tombo sy hala amin'ny fisitrahana ny trano.
Miisa 7000 ny mpianatry ny oniversiten'i Mahajanga ankehitriny. Raha ny lamina anatiny, mifarana ny faran'ny volana aprily izao ny fandraisana ny fangatahana hisitraka ny tranon'ny Mpianatra. Hatreto, mbola mpianatra 300 no naka ny “demande de logement” teo anivon'ny oniversite ary ny 250 amin'ireo no efa nanatitra izany.
Mbola mihenjan-droa ihany ny tady araka izany eo amin'ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny oniversite. Ny oniversite tsy afa-manoatra fa tsy maintsy miandry ny ministera amin'ny famitana ny fanamboarana, ny ray aman-dreny sahirana satria tsy maharaka ny fandaniana amin'ny fanofana trano sy vidin-jiro.
Efa mandeha avokoa anefa ny fampianarana rehetra ankoatra ny lalam-piofanana manofana ho mpitsabo. Mbola tolona iray lehibe ny famahana ny olan'ny anjerimanontolo manerana ny nosy satria tsy Mahajanga irery ihany no misedra olana.